Caalamka Online » XOG: Odayaasha Beesha Majeerteen oo Farmaajo la damacsan Qorshe laga yaabo inuu…….
XOG: Odayaasha Beesha Majeerteen oo Farmaajo la damacsan Qorshe laga yaabo inuu…….
Warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan socdaalka madaxweyne Farmaajo ugu ambabaxay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in madaxweyne suurta gal tahay inuu Garowe lagu kulansiiyo Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya hadana ah Senator ka tirsan Aqalka sare Cumar C/rashiid Cali sharmarke.
Ilo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Mas’uuliyiinta magaalada Garowe uu kula kulmayo ka mid yahay Cumar C/rashiid oo ka mid ah Siyaasiyiinta ku kacsan Dowladda Soomaaliya.
Waxgarad iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa Arrinta ku jira,waxayna doonayaan in madaxweyne laga dhaadhiciyo in lala kulansiiyo Cumar C/rashiid,islamarkaana la xaliyo khilaafka iminka ka dhextaagan.
Senator Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ayaa hormuud u ah Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada ku kacsan Dowladda Farmaajo,wuxuuna garwadeyn uga yahay Imaaraadka Carabta oo maalgelineysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa aamusineysa Siyaasiyiinta Mucaaradka,waxayna adeegsaneysaa xeelado isugu jira lacag iyo xoog.